नेपालको नयाँ नक्साको विरोध गर्दै भारतको कूटनीतिक नोट – Sandesh Munch
July 9, 2020 206
ग्रिक दार्शनिक एरिस्टोटलले मानिस सामाजिक प्राणी हो र समाजदेखि पर रहन सक्ने व्यक्ति ईश्वर अथवा पशु हुनुपर्छ भनेका छन् ।
हाम्रो समाजमा जान्नेको कमी छैन । समाजमा सुन्नेको पनि छैन । र, समाजमा बुझ्नेको पनि कमी छैन । हरेक व्यक्ति आफू र आफ्ना लागि प्रचुर र पर्याप्त छ । कसैले कसैलाई जान्दैन र कसैले कसैलाई मान्दैन । जाने पनि नजाने पनि जान्ने बन्नु परेको छ । ठूलो देखिनु परेको छ । जानेकालाई होच्याएर, खसाएर र गिराएर वा पछारेर किन नहोस आफू माथि देखिनु परेको छ । आफूले कति जानेको छ त्यो कुरा त आफैलाई थाहा होला, तर अर्काको दोहोलो काड्नु परेको छ ।
ज्ञान लिँदा लाज हुने, ज्ञान दिँदा अर्ति नपुग्ने । त्यसपछि के गर्ने ? कसैलाई आफूभन्दा महान भन्न र गन्न मन पर्दैन । अनि के गर्ने ? आज यसैको कारण राम्रो कुरा सबैलाई नपच्ने भयो । नराम्रो कुरा त त्यो कानुनसम्मत र आधिकारिक नै भएन ।
हामी समाज सभ्य र भव्य हुनुपर्छ भन्छौं । कसैले कसैलाई नटेरेर, कसैले कसैलाई सम्मान नगरेर आफुमात्र सर्वेसर्वा मानेर समाज सभ्य र भव्य बन्छ त ? समाजमा हरेकलाई आफ्ना कुरा सुनाउन हतार छ । तर, अर्काको कुरा सुन्न फुर्सद नै छैन । हरेकलाई आफ्नो पोल्टामा बाजी मार्न हतार छ । मानिस माया त्यागेर घृणित बन्दैछ । दया त्यागेर निर्दयी बन्दैछ ।
मानिस करुणा त्यागेर पाषण बन्दैछ । मानिस अहिंसा त्यागेर हिंस्रक बन्दैछ । मानिसहरु आ–आफ्नो व्याक्तिगत स्वार्थ, झगडा, लोभ, क्रोध, असहिष्णुता, साम्प्रदायीकता, भाषागत विभेद, वर्ग विभेद जस्ता सांगुरो सोचबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो सोचबाट ग्रसित हाम्रो समाजलाई सकारात्मक रुपान्तरण गर्नु एउटा चुनौतीपुर्ण बिषय बनेको छ ।
अर्कोतर्फ शिक्षा अत्यन्तै महंगो छ । शिक्षामा गरेको लगानी उठाउन सबैजना पैसाको पछाडि दौडिएका छन । जोसँग पैसा छ उसँग मात्र सबथोक छ, उसलेमात्र आफ्ना आवश्यक्ताहरु पूरा गर्ने सामथ्र्य राख्छ । परिश्रम गर्ने, उत्पादन गर्नेले भन्दा बिचौलियाले धेरै पैसा कमाउँछ ।
हिजो सबथोक अभाव हुँदा मानिस स्वस्थ, खुशी, सुखी, शान्त र दिर्घायु हुने तर आज सर्वसम्पन्न हुँदाहुँदै पनि दुखी, चिन्तित, आक्रान्त, अशान्त, भयभित, अस्वस्थ, अल्पायु किन हुने ?
हिजो मानिस अभावमा पनि सोच, चिन्तन, मनन, र विचारमा निकै धैर्यवान र सकारात्मक थियो । जसले गर्दा अप्ठ्यारालाई सरलतामा परिवर्तन गर्ने शक्ति प्राप्त हुन्थ्यो । तर, आज त्यो छैन । सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि मानिसमा धैर्यता छैन । संयमता छैन । शान्त र चित्त एकाग्र छैन, सन्तुष्टि छैन । अर्थात कुनै पक्षमा सकारात्मक भाव र सकारात्मक उर्जा नै छैन । जसको कारण आज निकै भयावहको स्थितिमा छ मान्छे । सम्पन्नताका अगाडि मानिस दुखित हुनु भनेको डरलाग्दो अवस्था हो ।
मानिस सुखी भएर पनि खुसी हुन कठिन मान्दैछ । समृद्धिले पनि शान्ति र आनन्द लिन सकेको छैन । यसका साथै आजको मान्छे दीनहीन, रुग्ण, फोहोरी र अश्लील बन्दै गएको छ । उसमा व्यक्तिवादी चरीत्र र भोगवादी प्रवृति निकै बढेको छ । पारिवारिक बिखण्डन बढेको छ । दया, प्रेम, क्षमा, सेवाजस्ता भावनामा ठूलो ह्रास आएको छ । समाज समाज जस्तो छैन । मानव दानव हुँदैछ । यसबाट आउने नतिजा भयावह हुन सक्छ । तसर्थ, हरेकले मानवीय भावनालाई मनन गर्न जरुरी छ । राज्य सञ्चालनको जिम्मेवार निकायको भुमिका यसमा प्रभावकारी बन्नु जरुरी छ ।
आज हामी त्यही समाजको एक अंगका रुपमा बाँचिरहँदा समाज कता जाँदैछ भन्ने चिन्तामा छौं । हाम्रो समाज कस्तो अवस्थामा छ ? समाजको मनोविज्ञान के छ ? यावत कुरामा मानिस कतै न कतैबाट जोडिएकै छ । चाहे त्यो एक अभिभावकलाई आफ्ना सन्ततीको भविष्यको चिन्ताले सताएको विषय होस् वा कुनै नवदम्पतीको सम्बन्धविच्छेदको घटना होस् ।
जन्म दिने बाबुआमालाई वृद्धाआश्रममा छोडेर जाने सन्तानले समयको महत्वको अतिरञ्जना गराएका विषय हाम्रो समाजमा अब नौला रहेनन् । सुकरातले भनेझैं शिक्षाबाट ज्ञानको मार्ग त खुल्छ, तर समाज निश्चित सर्वव्यापी मूल्य र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन्छ । त्यतिमात्रै नभएर त्यहाँं समाजिक तथा सांस्कृतिक प्रथाहरुले भुमिका खेलिरहेका हुन्छन् ।
यहाँनेर एउटा प्रश्न खडा हुन्छ, के वृद्धाश्रममा आमाबाबु छाड्ने सन्तानले शिक्षा पाएका थिएनन् त ? यसको जवाफ हामी हाम्रै समाजमा भेट्न सक्छौं ।
हामी हाम्रो दैनिक जीवनलाई कति सहज र व्यवस्थितरुपमा बिताउँदै छौं भन्ने विषयले मानिसको जीवनचर्यामा फरक ल्याउने गर्छ ।
सामान्यतया आफ्नो कमाइको तुलनामा बढी खर्च गर्ने अनुपात हाम्रो समाजमा बढ्दै गएको छ । हामीले हाम्रो समाज कता जाँदैछ भनेर ध्यान दियौं भने हाम्रो समाजमा आपसी सम्बन्धमा दरार पैदा गर्ने घटना बढेका समाचार सुन्छौं । सुन्ने मात्र होइन, प्रत्यक्ष ती घटनाको साक्षी हुन्छांै, शिकार बन्छौं । अझ कतिपय अवस्थामा पीडक र पीडितको भुमिकामा आफंैलाई पाउँछौं ।
छिट्टै धन आर्जन गर्न र उपलब्ध सुख सुविधा भोग गर्न सबैजना लालायित हुन्छन् । हामीले आफ्नो आर्थिक अवस्थामा चित्त बुझाउन नसक्दा समाजमा आफूलाई अलग पाउँछांै अनि आफूले पाएको शिक्षा, संस्कारलाई भत्काउँदै सफलताका नाममा जे गर्न पनि उद्दत्त हुन्छौं । तर, सफलता केलाई मान्ने भन्ने विषय हाम्रो मष्तिस्क भन्दा बाहिर जान्छ ।
आज सबै वर्गसँग एकखाले भोक प्यास र शक्तिमोहले संकट चुलिँदै छ । आज हामी २१ औं शताव्दीमा हाम्रो समाजको अवस्थालाई सहजरुपमा चित्रण गर्न सकिरहेका छैनौं । हामी हाम्रो समाज, संस्कृति, चिन्तन र व्यवहारमा भएको असमान्जस्यताबीच बाँचिरहेका छौं । अझै भनौं, समाजमा एक आपसको विरोधी वर्गका बीच द्वन्द्वात्मक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं ।
दिनहुँ पारिवारिक हिंसा र हत्याका घटनाले आफ्नो अर्को छुट्टाउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले मानिसलाई जंगली जनावरबाट भन्दा आफ्नैबाट बच्न मुश्किल परेको छ । मानवता हराएको आभास हुन थालेको छ ।
हाम्रो समाज आवश्यकताभन्दा अधीक सिको र हरेक विषयको नकारात्मक मानसिकताले विकृत बन्दै गइरहेको छ । समाजमा एक व्याक्तिबाट अर्कोलाई, एक परिवारबाट अर्को परिवारलाई गरिने सरसहयोग हराउँदै गएको छ । समाज दिनानुदिन स्वार्थ बन्दै गइरहेको छ । समाजमा परोपकारी भावनाको अभाव खड्किन थालेको छ ।
अविकसित समाजले देश बिगार्छ । त्यसैले कुनै पनि व्यक्ति बन्न, समाज बन्न, वा सिंगो मुलुक बन्न राम्रो र सकारात्मक कुरालाई स्वीकार्नु पर्छ र ग्रहण गर्नुपर्छ । सकारात्मक उर्जाविना कुनै पनि कुरा सफल हुन सक्दैन । सकारात्मक सोच, विचार र उर्जामा शक्ति हुन्छ भन्ने कुराको पनि नितान्त ज्ञान हुनु जरुरी छ ।
समाजमा बौद्धिक विकासको आवश्यकता छ । बौद्धिक विकास भनेको शिक्षा मात्र होइन, मानवता सद्भाव र मन–मष्तिस्कको विकास पनि हो ।
समाज कस्तो हुनुपर्छ ?
समाज मानिसले सहज जीवनयापन गर्न सकोस् भन्ने हेतुले निर्माण भएको हो । मानिसले आफ्नै ईच्छा वा चाहनाले समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छ । यसरी हेर्दा समाज मानवीय सम्बन्धहरुको त्यो संगठन हो, जुन मानवद्वारा निर्मित, सञ्चालित तथा सदा परिवर्तित गर्न सकिने हुन्छ ।
यहाँको विद्यमान समस्या हरेक कुरामा राजनीतिकरण अनि त्यसमा मिसिएको अपराधीकरण हो । सामाजिक द्वन्द्वका सुचकांक हाम्रा लागि हानीकारक हुन् । लामो मानव इतिहासले सिद्ध गरेको वास्तविकता के हो भने विकास र विनास एकनासले अगाडि बढेको हुन्छ । केही सिर्जनाका छालहरुसँगै केही विनासका धब्बाहरु देखिन्छन् नै । आधुनिकताका नाममा हुने गरेको सामाजिक विकृति र विसंगतिले दिनानुदिन नेपाली समाज ग्रसित छ ।
मानिस सामाजिक प्राणी हो । उसका लागि समाज चाहिन्छ । तर, समाज कस्तो छ र समाज कतातिर जाँदैछ भन्ने थाहा नै छैन । समाज बनाउने व्यक्तिले हो । तर, यही व्यक्तिलाई थाहा छैन कि समाज कसरी बनाउने ? समाज बनाउने खास तरिका भए पनि उसले त्यो तरिका समाजमा प्रस्तुत गर्न सक्दैन । प्रस्तुत गर्ने हिम्मत गरिहाल्यो भने पनि उसको आदर्श सुन्ने चासो र फुर्सद कसैलाई हुँदैन ।
हामीले सभ्य समाजको परिकल्पना गर्नुपर्छ । समाजलाई परिवर्तनको बाटोमा डोर्‍याउन सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुपर्छ ।
अब हामीले राम्रोसँग मनन गर्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिलेसम्म हामीले सामाजिक परिस्थितिलाई बदलेर समाज परिवर्तन गर्न खोज्यौं । तर, अब व्यक्तिगत मनस्थितिलाई बदलेर सामाजिक बनावटको परिवर्तनतिर लाग्नुपर्छ ।
Prevकर्णालीमा ११ जना कोरोना संक्रमित थपिए, ३० जना डिस्चार्ज
Nextनेपाली समयानुसार बिहीबार अपराह्नसम्म प्राप्त समाचारअनुसार कोरोना भाइरसका कारण बिरामी भएका ७० लाख ७१ हजार ४६७ जना व्यक्ति निको भएर फर्केका छन्।
२४ घण्टामा ९ संक्रमितको ज्यानगयो कोरोनाले २८० जनाको मृ त्यु